January 14, 2021 - ApannPyay Media
March 1, 2021 January 14, 2021 by ApannPyay Media
ဒိုင်းခင်ခင်၊စုဖုရားလတ်နှင့်သီပေါမင်းတို့ရဲ့သုံးပွင့်ဆိုင်အချစ်ဇာတ်လမ်း ဒိုင်းခင်ခင်၏ ဖခင်အရင်းသည် ကန်နီမြို ့စား ဖြစ်လေသည်။ ကန်နီမြို ့စားသည် ဒိုင်းဝန်မင်းကြီးကတော်၏ မောင်အရင်း ဖြစ်လေသည်။ ဒိုင်းဝန်မင်းကြီးတို့သည် သားသမီး မထွန်းကားသဖြင့် ကန်နီမြို ့စား၏ သမီးတော်လေး ကို မွေးစားခဲ့ကြပြီး ခင်ခင်ကြီး ဟု နာမည်ပေးခဲ့ကြသည်။ ဖခင်နာမည် ကို အစွဲပြု ကာ ဒိုင်းခင်ခင် ဟု လူသိများခဲ့လေသည်။ ဒိုင်းဝန်မင်းကြီးတို့သည် ရွှေကူမင်းသား၏ မြေးတော် မောင်ဖေငယ်ကိုလည်း သားကဲ့သို့ ချစ်မြတ်နိုးသဖြင့် အခွင့်ရတိုင်း ဒိုင်းခင်ခင်ဖြင့် ငယ်စဉ်ကတည်းက ဆော့စေရာ အရွယ်ရောက်သော် မောင်ဖေငယ်သည် ဒိုင်းခင်ခင်ကို ချစ်ခင်စွဲမက်လေတော့သည်။ မောင်ဖေငယ်၊ ရနောင်မောင်မောင်တုတ် နှင့် သီပေါမင်း တို့သည် ငယ်သူငယ်ချင်း များဖြစ်ကြလေ၏။ မောင်ဖေငယ်သည် မင်းသားမျိူ းရိုးဖြစ်သဖြင့် သီပေါမင်း နှင့် … Read more
January 14, 2021 by ApannPyay Media
ငွေလာဂမုန်းနဲ့လာဘ်ရွှင်စေဘို့ ဒီဆောင်းပါးလေးကလည်း ၀ါစတုသျှတ္တရ စာအုပ်ငယ်မှာ ပါတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ် မိတ်ဆွေများ အကျိုးရှိစေဘို့ မျှဝေ ပေးလိုက်ရပါတယ်။ စင်္ကာပူ က အိမ်အများစုမှာ- Money plant လို့ ခေါ်တဲ့- နွယ်ပင်တွေ၊ မြန်မာ မှာတော့- ငွေလာ ဂမုန်း လို့ လည်းကောင်း၊ တချိုကျတော့- အစိမ်းရွက်မျိုးကို ရွှေလာ ဂမုန်း ။ အဖြူ ရောင် အရွက်မျိုးကို ငွေလာ ဂမုန်းလို့ လည်းကောင်း ခေါ်တတ်ကြတဲ့- ရွှေလာငွေလာ ဂမုန်းအပင်များ စိုက်ထားကြလေ့ရှိပါတယ်။ မျိုးကွဲအနည်းငယ် ရှိကြပါတယ်။ တရုပ်လူမျိုး တို့ရဲ့ ဖုန်းရွှေ ပညာ အရရော မဇ္စျိမ တိုင်းသားတို့ရဲ့ ၀ါစတု သျှတ္တရ ပညာ အရပါ ဒီအပင် ဟာ … Read more
ဝါးကိုမှိုမတက်ပိုးမထိုးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဝါးကို မိူမတက် ပိုးမထိုးအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ မေးနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအတွက် ဗဟုသုတ ရစေရန်အလိုငှာ လက်လမ်းမှီသလောက် နည်းလမ်းများကိုဝေမျှ ပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁)Boric_Acid နှင့် Borax Powder ဖြင့် ဆေးစိမ်ခြင်း အများအခေါ်အဝေါ် (လက်ချားအမူန့်) Boric powder နဲ့ Borax acid ကို ၁ ဆနှင့် ၁ဆ ခွဲ ရောပြီး ၁ ပေါင်လျှင် ရေ၃ဂါလံ နှင့် ၅ ရက်ခန့်စိမ်ခြင်း ဖြင့် ဝါးများကို မိူမတက် ပိုးမထိုးအောင် ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။ ဝါးအတွင်းရှိ သကြားရည်သည် ရေထက်ပြစ်သည်။ ဝါးကို ကန်အတွင်း စိမ်ထားပါက သကြားရည်များထွက်ကာ အချဉ်ပေါက်လာသည်။ နောက်ထပ်တဖန် စိမ်သောအခါ အလျဉ်ရလာသောကြောင့် လေးရက်ခန့်ကြာလျှင် အချဉ်ပေါက်လာသည်။ … Read more
သင့်လက်မ ပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ သင့်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး
သင့်လက်မ ပုံစံက ပြောပြနေတဲ့ သင့်စိတ်နေစိတ်ထားနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လက်ပုံစံက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အကြောင်းကို အများကြီး ပြောပြနိုင်ပါတယ်။ သင့်လက်ချောင်းပုံစံတွေကို ကြည့်ပြီး မှုခင်းဆိုင်ရာ ကိစရပ်တွေ ကိုတောင် အဖြေရှာ နိုင်ပါတယ် ။ အထူးသဖြင့် လက်မမှာ လက်ဆစ်နှစ်ဆစ်သာ ရှိတဲ့ အတွက် ပိုမို ထူးခြား ပါတယ် ။ ထိုလက်မကြောင့်ပဲ ကျွန်တော်တို့ကို အခြား တိရစာန်တွေနဲ့ ကွဲပြားစေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်တောင်မှ လက်မပုံစံချင်း မတူညီကြ ပါဘူး။ ထိုသို့ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ကွဲပြားတဲ့ လက်မပုံစံကို ကြည့်ပြီး ထိုလူရဲ့ စိတ်နေ စိတ်ထားနဲ့ ကိုယ်ရည် ကိုယ်သွေးကို အကဲဖြတ် နိုင်ပါတယ်။ (၁) A အမျိူးအစား … Read more
အသီးအရွက်ကို တစ်လခံအောင်ထားနည်းနောက်ဆုံးတွေ့ရှိချက် ထေရီစမ်းသပ်တဲ့အကြာဆုံးအရွက်အထားခံနည်း နောက်ဆုံးပေါ်တွေ့ရှိချက်… အထူးသဖြင့်နံနံပင်ပေါ့.. ရှားတဲ့အချိန်ကျ…လွှတ်ရှားတာမဟုတ်လား.. ထေရီတို့ဗမာဟင်းတွေကလည်းဘာလေးချက်ချက် နံံနံပင်လေးအုပ်ရမှ..ခပ်ရမှ… အသုတ်ထဲလည်းနံနံပင်…အပြုတ်ထဲလည်းနံနံပင်ဆိုသလို.. သိမ်းကြပါတယ်အမျိုးမျိုး…အထိုက်အလျောက်ခံပါတယ်.. ဒီတိုင်းသတင်းစာနဲ့အခြောက်ပတ်သိမ်းတာကတော့ ရိမသွားပေမဲ့ကြာရင်ဝါသွားခြောက်သွားတတ်တယ်.. အဝတ်ရေညှစ်ပတ်သိမ်းရင်လည်းကြာကြာမရဘူး…စိမ်းနေပေမဲ့ရိလိုက်လာတတ်တယ်.. ခု…ထေရီမမျှော်လင့်ဘဲတွေ့တဲ့နည်းကတစ်လလောက်ထိ မရိမပုပ်..မဝါမခြောက်ဘဲခံလို့ အိမ်ရှင်မတို့ကိုဝမ်းသာအားရပြောပြမှာ… နံနံံံပင်လတ်လတ်ဝယ်လာပြီဆိုရေမဆွတ်တော့ဘဲပလတ်စတစ်အိတ်မှာ လေလုံအောင်ကျစ်ကျစ်ထုပ်ပါ… သေချာအောင်သရေပင်ချည်လိုက်နော် ပြီးမှ..ရေစိုကိုညှစ်ထားတဲ့အဝတ်နဲ့ပြန်ပတ်.. သူ့လည်းကျစ်ကျစ်ပတ် ..နောက်တခါပလတ်စတစ်အိတ်ထဲပြန်ထည့်ပတ်.. လေထုတ်ပြီးကျစ်ကျစ်စည်း..ရိုးရိုးchill room မှာထား…စားပေရော့စိမ်းစိမ်း….နေပေရော့တစ်လ…….. Htei Ri အသီးအရြက္ကို တစ္လခံေအာင္ထားနည္းေနာက္ဆုံးေတြ႕ရွိခ်က္ ေထရီစမ္းသပ္တဲ့အၾကာဆုံးအ႐ြက္အထားခံနည္း ေနာက္ဆုံးေပၚေတြ႕ရွိခ်က္… အထူးသျဖင့္နံနံပင္ေပါ့.. ရွားတဲ့အခ်ိန္က်…လႊတ္ရွားတာမဟုတ္လား.. ေထရီတို႔ဗမာဟင္းေတြကလည္းဘာေလးခ်က္ခ်က္ နံံနံပင္ေလးအုပ္ရမွ..ခပ္ရမွ… အသုတ္ထဲလည္းနံနံပင္…အျပဳတ္ထဲလည္းနံနံပင္ဆိုသလို.. သိမ္းၾကပါတယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး…အထိုက္အေလ်ာက္ခံပါတယ္.. ဒီတိုင္းသတင္းစာနဲ႔အေျခာက္ပတ္သိမ္းတာကေတာ့ ရိမသြားေပမဲ့ၾကာရင္ဝါသြားေျခာက္သြားတတ္တယ္.. အဝတ္ေရညႇစ္ပတ္သိမ္းရင္လည္းၾကာၾကာမရဘူး…စိမ္းေနေပမဲ့ရိလိုက္လာတတ္တယ္.. ခု…ေထရီမေမွ်ာ္လင့္ဘဲေတြ႕တဲ့နည္းကတစ္လေလာက္ထိ မရိမပုပ္..မဝါမေျခာက္ဘဲခံလို႔ အိမ္ရွင္မတို႔ကိုဝမ္းသာအားရေျပာျပမွာ… နံနံံံပင္လတ္လတ္ဝယ္လာၿပီဆိုေရမဆြတ္ေတာ့ဘဲပလတ္စတစ္အိတ္မွာ ေလလုံေအာင္က်စ္က်စ္ထုပ္ပါ… ေသခ်ာေအာင္သေရပင္ခ်ည္လိုက္ေနာ္ ၿပီးမွ..ေရစိုကိုညႇစ္ထားတဲ့အဝတ္နဲ႔ျပန္ပတ္.. သူ႔လည္းက်စ္က်စ္ပတ္ ..ေနာက္တခါပလတ္စတစ္အိတ္ထဲျပန္ထည့္ပတ္.. ေလထုတ္ၿပီးက်စ္က်စ္စည္း..႐ိုး႐ိုးchill room မွာထား…စားေပေရာ့စိမ္းစိမ္း….ေနေပေရာ့တစ္လ…….. Htei Ri
ဦးဖိုးအေးတို့မိသားစုသင်္ချိုင်းထဲမှမျှစ်ကိုချိုးယူပြီးစားလိုက်မိကြသောအခါ *သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ* လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ။ သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူတွေသမုတ်ထားလို့သာ သင်္ချိုင်းဖြစ်နေတာပါ ငါဆို ဒီသင်္ချိုင်းက ထွက်တဲ့မျှစ်တွေ စားလာတာ ကြာပါပြီ။ *သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာ* လူတစ်ယောက်က မေးတယ်… “ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား…? ဖြေ။ ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ။ သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ မြေကြီးပါပဲကွာ လူတွေသမုတ်ထားလို့သာ သင်္ချိုင်းဖြစ်နေတာပါ ငါဆို ဒီသင်္ချိုင်းက ထွက်တဲ့မျှစ်တွေ စားလာတာ ကြာပါပြီ။ … Read more
အိမ်ထဲမှာရေစိုအဝတ်လှန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကျန်းမာရေးဆိုးကျိုးများ လျှော်ပြီးသားအဝတ်တွေကဖြစ်စေတဲ့ ရေငွေ့ပြန်ခြင်းက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အတွက် အိမ်ထဲမှာ အဝတ်မလှန်းဖို့ကို ပညာရှင်များက တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ကလေး ၃ ယောက်အဖေဖြစ်သူ Craig Mather က အိမ်ထဲမှာ အဝတ်မလှန်းဖို့ သတိပေးချက်တွေကို သတိမမူမိဘဲ အဝတ်လှန်းတဲ့အကျင့်ကြောင့် အဆုတ်ကူးစက်ရောဂါဖြစ်လာပါတယ်။ အခန်းထဲမှာ အဝတ်လှန်းခြင်းကြောင့် စိုထိုင်းထိုင်းဖြစ်ခြင်းက မှိုပေါက်ပွားစေပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အဆုတ်ရောဂါတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ Craig Mather က နာတာရှည် အဆုတ်ရောဂါ ဖြစ်ပွားနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပြီး မှိုပိုးကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကူးစက်ပိုးဖြစ်တယ်လို့ ဆရာဝန်များက သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ဆရာဝန်ဖြစ်သူက သူ့ကို အိမ်ထဲမှာအဝတ်လှန်းတာကို မရပ်ဘူးဆိုရင်တော့ ရောဂါပိုဆိုး လာနိုင်တယ်လို့ သတိပေးစကားပြောကြားခဲ့တဲ့အတွက် အိမ်ထဲမှာ အဝတ်မလှန်းတော့ဘဲ ၁၂ လလောက်အကြာမှာ ရောဂါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားတာကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကြုံတွေ့ရတာက … Read more
လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာတမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ်
လက်ဖဝါးမှာ ‘M’ အက္ခရာရှိသူတွေဟာတမူထူးခြားနေသူတွေဖြစ်တယ် လက်ဖဝါးရှိ လက္ခဏာကောက်ကြောင်းလေးတွေက မိမိဝိသေသလက္ခဏာနဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖော်ညွန်းနေတာလို့ ဆိုကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လက်ဖဝါးမှာ M ပုံသဏ္ဍာန် အက္ခရာစလုံးရှိသူတွေဟာ တမူထူးခြားသူလို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ ထူးထူးခြားခြား အထုံ ပါရမီ ပါသူ၊ ဝမ်းတွင်း အသိရှိသူ၊ နောက်ပြီး ထူးကဲတဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ လို့လည်း ဆိုကြပါတယ်။ မိမိချစ်ရသူတစ်ယောက်က လက်ဖဝါးမှာ M အက္ခရာ ရှိပါက အချက်တစ်ချက်ကို သိထားရပါမယ်။ နောက်ပြောင်ခြင်း၊ လိမ်ညာမုသားပြောဆိုခြင်းနဲ့ ကလိမ်ကျခြင်းတွေ လုံးဝ မလုပ်မိဖို့ပါပဲ။ လုပ်မိသွားရင်တော့ သင့်ကို လိမ်ညာပြောတတ်သူလို့ သူ အမြဲသတ်မှတ်နေပါလိမ့်မယ်။ လက်ဖဝါးမှာ M အက္ခရာစလုံးရှိတဲ့ အမျိုးသမီးတွေမှာ အမျိုးသားများထက် ဝမ်းတွင်းအသိ ပိုပြင်းထန်ကြပါတယ်။ လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးမှာရှိပါက အမျိုးသမီးမှာ … Read more
ငွေဝင်လာဘ်ရွှင် ယတြာ အစီအရင် ငွေကြေး လာဘ်အလွန် တိတ်နေခြင်း ရှာသမျှ ပြန်ကုန် နေခြင်း ကြွေးငွေရ စရာများ မရခြင်း ပေးစရာများမပေးနိုင်ခြင်း စသော ငွေကြေးအခက်အခဲ များအတွက် သုံးနိုင် ပါတယ်။ 1. တနင်္ဂနွေ သားသမီးများ သောကြာနေ့ မနက် ၉နာရီတွင် ရွှေထီး ၅လက်လှူပါ။ 2. တနင်္လာ သားသမီးများ စနေ့မနက် ၉နာရီတွင် ရွှေထီး ၁၂လက် လှူပါ။ 3. အင်္ဂါ သားသမီးများ တနင်္ဂနွေနေ့ မနက် ၉နာရီတွင် ရွှေထီး ရလက် လှူပါ။ 4. ဗုဒ္ဓဟူး သားသမီးများ တနင်္လာနေ့ မနက် ၉နာရီတွင် ရွှေထီး ၅လက်လှူပါ။ 5. ကြာသာပတေးသားသမီးများ အင်္ဂါနေ့ မနက် … Read more